Xarunta Cilmi Baadhista Caalamiga Ah Ee Kubbada Cagta CIES Oo Soo Saartay Tobanka Xidig Ee Bandhigooda Si Waali Ah Sare Ugu Qaaday Qiimahooda Suuqa? – GOOL24.NET
Xarunta Cilmi Baadhista Caalamiga Ah Ee Kubbada Cagta CIES Oo Soo Saartay Tobanka Xidig Ee Bandhigooda Si Waali Ah Sare Ugu Qaaday Qiimahooda Suuqa?
March 12, 2018 Mahamoud Batalaale
Xarunta cilmi baadhista caalamiga ah ee kubbada cagta ee CIES Football Observatory oo looga bartay in ay aduunka u soo bandhigto xogo badan oo kubbada cagta ah isla markaana si wayn loogu qiimeeyo arimo kala duwan oo Sportska ah ayaa soo saartay liiska 10 ka xidig ee xili ciyaareedkan ku cusbaa horyaalka Premier League ee sida waalida ah qiimahooda sare ugu qaaday kadib bandhig cajiib ah oo ay sameeyeen.
CIES Football Observatory oo ah xarunta kaliya ee si joogto ah u soo saarta qiimayno kala duwan oo kubbada cagta la xidhiidha isla markaana cilmi ahaan lagu saleeyay ayaa shaacisay tobanka xidig ee ay kooxaha shanta horyaal ee Yurub ugu waa wayni la soo saxiixdeen bilawgii xili ciyaareedkan ee qiimihii markaas lagula soo wareegay si wayn hadda uga qaalisan.
Sida lagu xusay warbixin lagu daabacay CIES Football Observatory, xididga xulka qaranka Masar iyo kooxda Liverpool ee Mohamed Salah ayaa noqday kan ugu layaabka badan ee qiimihiisa suuqa kala iibsiga si waali ah sare ugu qaaday bandhigii uu ka sameeyay Anfield.
Xarunta daraasaadka caalamiga ah ee kubbada cagta CIES Football Observatory ayaa qiimayntan isbarbar dhig ku samaysay qiimayntii ay soo sartay horaantii bishii September 2017 markii uu suuqii kala iibsiga xaagaagii la soo dhaafay xidhmay waxaana xogtaas ku jirtay in ciyaartoyda la qiimaynayay qaarkood lagula soo wareegay qiimo ka badan intii ay suuqa ka joogeen halka kuwo kale qiimo ka hooseeya intii ay ahaayeen lagula soo wareegay.
Sida warbixintan cusub lagu shaaciyay, Mohamed Salah aaya hadda suuqa kala iibsiga kaga qiimaysan 162.8 milyan euros wuxuuna sare u kac qiimihiisa suuqa ka sameeyay intii uu xili ciyaareedkani socday 74.7 miilyan euros waana xidiga qiimihiisu inta ugu badan sare u kacay.
Goolhayaha Manchester City ee Ederson Moraes ayaan waxba ka hoosayn Mohamed Salah wuxuuna qiimihiisa suuqa sare u qaaday 74.4 milyan Euros kadib markii uu soo bandhigay qaab ciyaareed aan la rumaysan karin isla markaana aan markii hore laga filayn.
Da’yarka Manchester City ee Leroy Sane ayaa kaalinta saddexaad ku jira wuxuuna qiimihiisa suuqu sare u kacay xili ciyaareedkan 63 milyan euros.
Fiiro Gaar Ah: Qiimaha ku hoos qoran taariikhda 09/2017 waa qiimayntii la sameeyay markii uu xidhmay suuqii xagaagii la soo dhaafay ee bilawgii xili ciyaareedkan halka tirada ku hoos qoran taariikhda 03/2017 ay tahay qiimaynta hadda la soo saaray halka ay tirada ugu danbaysaa tahay qiimaha ku kordhay ciyaartoy kasta marka la kal jaro qiimihii hore iyo kan uu hadda yahay.
Haddaba halkan kaga bogo dhamaan tobanka xidig ee bilawgii xili ciyaareedkan ay la soo saxiixdeen kooxaha shanta horyaal ee Yurub ugu waa wayn ee bandhigii ay sameeyeen ee fiicnaa awgeed si waali ah uu qiimahoodu sare ugu kacay.
Waxaa jira xidigo kale oo qiimahooda sare u qaaday isla markaana kooxahooda ku soo biiray bilawgii xili ciyaareedkan laakiin kuwani waa tobanka xidig ee qiimaha ugu badani uu ku kordhay qiimihii ay suuqa ka joogeen bilawgii xili ciyaareedkan.